ESI WEPU HOME.WEBALTA.RU SITE NA IHE NCHỌGHARỊ? - NCHEDO (NJE) - 2019
Esi wepu home.webalta.ru site na ihe nchọgharị?
N'oge na-adịbeghị anya, nje virus a ma ama apụtawo na ịbanye n'ime ihe nchọgharị niile na mgbe ị na-emeghe ha ka ị gaa na peeji nke //home.webalta.ru. N'ebe a, anyị ga-eleba anya otu esi ewepu webalta.ru site na ihe nchọgharị.
1. Gaa mmalite / akara panel / iwepụ mmemme. Ọzọ, chọọ ntakịrị uru na okwu webalta na-eme. Ị nwere ike iji ọchụchọ ahụ. Ọ bụrụ na ịchọta ya, hichapụ ya (site n'ụzọ, n'isiokwu a, ị ga-amụta otu esi ehichapụ mmemme).
2. Nzọụkwụ nke abụọ bụ ịga na mwube ihe nchọgharị ma gbanwee ihu mmalite na nke ịchọrọ. Mgbe nke ahụ gasịrị, malitegharịa ihe nchọgharị ahụ.
Na-agbanwe akwụkwọ mmalite nke Webalta.ru na Yandex.ru na nchọgharị Mozilla Firefox.
3. N'ezie, ị na-amalite nchọgharị ahụ site na mkpirisi si na desktọọpụ ma ọ bụ ọrụ ọrụ? Wepụ ha! Gaa na menu mmalite ma ọ bụ ọbụna na folda ahụ na ntinye arụnyere na iweta ụzọ ọhụrụ na desktọọpụ gị! Webalta.ru na-edebanye onwe ya na Njirimara nke ụzọ mkpirisi na mgbe ị na-amalite oge ọ bụla ị ga-amalite ihu igwe a ...
Ọ bụ ihe niile gbasara ụzọ mkpirisi nke ị ga-esi malite nchọgharị ahụ. Ị nwere ike pịa ya na bọtịnụ aka nri ma họrọ "Njirimara". Na windo nke gosipụtara, ṅaa ntị na ụzọ (ihe), nke na-agba ihe nchọgharị gị. Ị ga-achọpụta na mgbe "... firefox.exe" agbakwunyere adres nke webalt ọjọọ a.
Chọta usoro mmalite nke usoro Firefox. Mgbe ahụ mepee aha ọhụrụ.
Mgbe usoro ahụ gasịrị, gbalịa ịme nchọgharị gị. O yikarịrị ka ọ ga-abụ na "ọhụụ" ahụ.
4. Maka ihe ka mma, iji dozie ndekọ ahụ, iji chọpụta faịlụ ndị ọzọ, budata nnukwu ọrụ bara uru - Malwarebytes Anti-Malware. Ọbụna nnwere onwe nnwere onwe zuru ezu iji lelee PC gị maka ụdị spam na nje niile, nke ọma, dozie egwu ndị a. N'agbanyeghị, n'agbanyeghị malware Kaspersky arụnyere, Malwarebytes Anti-Malware hụrụ ma wepụ egwu 14 na PC m.
Mgbe mbụ ị malitere, ị nwere ike ịhọrọ nyocha ngwa ngwa iji mara onwe gị na ike nke usoro ihe omume ahụ.
Malwarebytes Anti-Malware weere nanị nkeji ise iji chọpụta faịlụ kachasị mkpa. Site n'ụzọ, e nwere ngwá egwu 14!
Iji dozie mkpa ịmalitegharịa kọmputa gị!
Mgbe usoro niile ahụ gasịrị, PC gị ga-agbanyeghachi. Site n'ụzọ, mgbe ị wepụsịrị home.webalta.ru site na ndị nchọgharị, ọ bara uru iji bulie ma mee ngwa ngwa Windows.
Afterword ... Kọmputa ahụ na-arụ ọrụ ọjọọ, na-atụgharị ya na peeji ndị ọzọ, wdg. Ọ na-eche echiche banyere ịtinye Windows, ma kpebiri ịgbalị ịkwalite. Webalt'u wepụrụ, kpochapụ HDD site na mpempe akwụkwọ, diskigmented disks, ehichapụ mmemme ndị na-enweghị isi na-adabere na akpaaka ma kọmputa yiri ka a ga-anọchi ya! Oge na-agba ọsọ na-abawanye elu. Ọ bụrụ na ị nwere mgbaàmà yiri nke ahụ, gbalịa ịkwughachi ahụmahụ ahụ ...